Khilaaf Meel Sare Gaadhay Oo Ka Dhex Taagan Golaha Degaanka Boorama | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Khilaaf Meel Sare Gaadhay Oo Ka Dhex Taagan Golaha Degaanka Boorama
Published on September 28, 2018 by sdwo · No Comments
Boorama (SDWO): Wararka naga soo gaadhaya magaaladda Boorama ayaa sheegay in maanta xaaladda magaaladaasi ay kacsan tahay, taasoo ka dhalatay khilaaf iyo muran maalmahanba taagnaa oo soo kala dhex galay golaha degaanka Boorama.
Arrintaasoo ka dhalatay kadib markii dhawaan hanti dhawrka qaranku ay ku eedeeyeen in ay ku kaceen musuq maasuq maayarka Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo saraakiil kaloo ka tirsan dawladda hoose ee Boorama.
Iyadoo kiisaaskaas loo xidh xidhay masuuliyiin ka mida dawladda hoose ee Boorama, kuwaasoo ku xidhan xabsiga dhexe ee Boorama.
Waxaana falkaasi ka dhashay in xildhibaanadda golaha degaanku ay laba garab u kala jabeen, oo qaybina ay la safan yihiin maayarka, halka kuwo kale-na ay raacsan yihiin maayar ku xigeenka Boorama Cumar Ileeye Jaamac.
Xildhibaanadda la safan maayar ku xigeenka ayaa 25-kii bishan maayarka ka keenay mooshin xil ka qaadis ah. hase yeeshee subaxnimadii hore ee isla maalintaas ayaa waxa xarunta dawladda hoose ee Boorama isku gedaamay ciidamo fara badan oo boolis ah.
Taasoo dhicisaysay fadhigii ay doonayeen in xildhibaanadda maayarka ka soo hor jeedaa ay xilka kaga xayuubiyaan.
Intaas ka dib maayar Maydhane iyo xubnaha la safan oo maalintaas warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda dhexe ee Somaliland ku eedeeyay in ay faro gelin ku hayso golahoodda, isla markaana ay dabadda ka riixayso xildhibaanadda maayarka ka soo hor jeedda.
Geesta kale badhasaabka gobolka Awdal oo isna arrinta dhex galay ayaa la sheegay in uu maayarka Boorama Maxamed Xuseen Maydhane ka wareejiyay saxeexyadii dawladda hoose, isla markaana uu saxeexyadii ku wareejiyay maayar ku xigeenka.
Dhinaca kale wararka caawa naga soo gaadhaya Boorama ayaa sheegaya in halkaas uu gaadhay wasiirudawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye, kaasoo u jeedadda socdaalkiisu la xidhiidho sidii uu u demin lahaa xiisadda ka dhex taagan golaha degaanka Boorama.
Waxaanay wararku intaas ku darayaan in isla caawa uu wasiirudawlaha daakhiligu kulamo gooni gooni ah la yeeshay dhinacyadda iska soo hor jeedda.